Echefuola mkpa Ncheta ihe na gị iPhone? Atụla kwa nchegbu. Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ oké nnapụta enyere weghachite ehichapụ ncheta na ndị ọzọ na data si fọrọ nke nta niile iPhone ụdị ụzọ dị iche iche. Ị nwere ike mfe na-azụ furu efu ncheta na 5 minites.
Wondershare IPhone Nchetara Iweghachite
Weghachite ehichapụ ncheta on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Kpọmkwem naghachi ncheta si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Wepụ iTunes ndabere iji weghachite gara aga ncheta maka iPhones
Ọ bụghị naanị na ihe ncheta, ọ na-naputa ozi, kọntaktị, photos, videos, ndetu, wdg
Naghachi data furu efu ruru nhichapụ, ngwaọrụ ọnwụ, jailbreak, iOS nweta nkwalite, wdg
Selectively ịhụchalụ na-agbake ọ bụla data ị chọrọ
Nkebi nke 1: Kpọmkwem Naghachi ehichapụ Nchetara on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Part 2: Naghachi iPhone Nchetara si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-ike iṅomi ya
Mgbe ị na-agba ọsọ usoro ihe omume, anọ na mgbake mode nke naputa site na iOS Ngwaọrụ. Ahụ ga-esi gị iPhone jikọọ na kọmputa na iji eriri USB. Ozugbo gị iPhone haziri, ị ga-ahụ ihe omume si window dị ka ndị a.
Ị pụrụ nanị pịa na green Malite iṅomi button na isi window na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka ehichapụ ncheta na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake iPhone ncheta
Doppler ga-ewe gị a obere mgbe. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile hụrụ data na gị iPhone na Doppler N'ihi. Ha na-egosipụta na edemede gosiri na n'aka ekpe nke ahụ na windo. Ịhọrọ ihe nke Nchetara, na i nwere ike ihuchalu niile na-echetara ọdịnaya na zuru ezu. Tinye akà rà ihe ị chọrọ na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Nke ahụ bụ otú ahụ dị mfe na mmadụ niile nwere ike ijikwa ya nanị anyị. Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị site onwe gị.
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes tupu, ewepụta ehichapụ iPhone ncheta site iTunes ndabere nwekwara ike ịbụ a mma nhọrọ. Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ịgbanwee gaa na mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File. Mgbe ahụ prgoram ga-akpaghị aka ịhụ niile iTunes ndabere faịlụ echekwara na kọmputa gị na-egosipụta na ha na ndepụta.
Na-ahọrọ nri otu maka gị iPhone. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu, họrọ na-adịbeghị anya otu. Wee pịa na Malite iṅomi button wepụ ọdịnaya nke ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na weghachite ehichapụ ncheta maka gị iPhone
Ọ ga-eri gị a nkeji ole na ole wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Mgbe ọ bụ n'elu, ị nwere ike ịhụchalụ na ego niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na zuru ezu. Usoro ihe omume ọnọde unu nile nke ha na ige, dị ka igwefoto mpịakọta, foto iyi, ozi, kọntaktị, wdg N'ihi ncheta, ị nwere ike ozugbo pịa na ihe na ịhụchalụ ọdịnaya otu otu. Mgbe ahụ akara ọ bụla ị chọrọ na pịa na Naghachi button iji nweta ha azụ na kọmputa gị.
Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị site onwe gị.
Inyocha More maka Best Free Ncheta ngwa ọdịnala n'ihi iPhone ọrụ
Adịghị chọrọ ịnọgide na-eji Nchetara ngwa na iOS 7? E nwere ndị kasị mma free ncheta ngwa uzo ozo na-atụ aro maka gị.
Enweghị nsogbu ígwé ojii mmekọrịta, Speech ude, Oge & ebe Nchetara, Any.DO Oge, nchekwa, Edeturu, ugboro ugboro aga-eme, Kalinda echiche, Ogbugbu nkwado & ọzọ! Any.DO na-enye gị nhọrọ ma adịghị achọ complexity. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a na-echetara ngwa n'ihi na iPad na ma na-eme chọrọ ihe na-arụ ọrụ ọma na web, Any.DO bụ ụzọ na-aga.
Free - Download ya ugbu a
Wunderlist nwere niile atụmatụ nke a omenala ọrụ ngwa, ma na-eme tụkọtara nke gị ụzọ. Wunderlist bụ mfe ụzọ jikwaa na ịkọrọ gị kwa ụbọchị na-eme anatara. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa dabere na ọnọdụ ncheta ma ga-amasị a obere ihe na-achịkwa sorting na-ekere òkè aga-eme, na-aga na Wunderlist.
Listastic bụ nnọọ dị ka yi ka iOS 7 Nchetara ngwa, ma na-agbakwụnye a otutu ihe mmegharị maka ngwa navigation na ịchịkwa. Ọ bụrụ na ị na-amasị wuru na-Nchetara ngwa ma na-achọ nanị ọzọ, Listastic ka ị kpuchie.
Onye ọ bụla na-do item nwere nnọọ atọ nhọrọ:-eme ya taa, mee ya echi, ma ọ bụ ọ mere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe nnọọ mfe na-amalite na, ọ na-adịghị mma karịa amalite.
> Resource> Naghachi iPhone Data> Olee otú iji weghachite ehichapụ Nchetara on iPhone